Kusarongeka muZanu PF Koburitswa neSarudzo Dzayo
Chikumi 25, 2013
WASHINGTON DC — Kunyange hazvo mutungamiri wenyika, uye vari mutungamiri weZanu PF, vari kuti sarudzo dzinofanirwa kuitwa musi wa31Chikunguru, zviri kuitika mubato iri zvinoratidza kuti harina kugadzirira sarudzo dzemunyika.
Izvi zvabuda muarudzo daitwa munyika yose dzekutsvaga vachamirira Zanu PF musarudzo, izvo zvaburitsa pachena kusagadzirira zvakakwana kwebato iri sezvo munzvimbo zhinji manzi sarudzo idzi dzanonoka kutanga kana kusatoitwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Mapurisa anonzi ndivo vanga vachifambisa sarudzo (presiding officers) uye kutakura zvishandiswa zvesarudzo.
Munzvimbo zhinji zvinonzi manga musina mapepa ekuvhotesa kanawo vanovhotesa vacho.
Mudunhu reZvimba North kuMashonaland West, uko kuri kukwikwidzana gurukota rezvematunhu, VaIgnatius Chombo, nevaimbove mudzimai vavo, Amai Marian Chombo, pamwe naVaEdwin Matibiri, zvinonzi imba yeimwe nhengo yeZanu PF yakapiswa manheru eMuvhuro muchiitiko chanzi nevamwe chine chekuita nezvikwata zvemubato iri.
Mumatunhu anoti Mbire neBindura North neSouth mudunhu reMashonaland Central, sarudzo dzinonzi dzatadza kutanga nekuda kwekunonoka kusvika kwemapepa ekuvhotesa, pamwe nezvimwe zvimhingamipinyi.
Mumatunhu akawanda eMashonaland East anosanganisira Uzumba, sarudzo dzinonzi dzanonoka kutanga mushure mekunge vamwe vanhu vanzi havakwanisi kuvhota, kana kushaikwa kwezvekuvhotesa.
PaChikuhwa Primary School zvinonzi vanhu vazoimba nziyo dzechimurenga vachiratidza kunyunyuta kwavo mushure mekunge vaudzwa kuti mapepa ane mazita avo ange asipo. Vamwe vanonzi vasara vachiratidzira panzi kuvhota kwavharwa.
KuChipinge kuManicaland, sarudzo dzinonzi dzazotanga zuva rovira mushure mekunge dzanonotswa nekushaikwa kwemapepa ekuvhotera zvekuti vanhu vakawanda vanonzi vanga vatoparara kuenda kudzimba dzavo.
Asi mune dzimwewo nzvimbo dzakaita semuHarare neBeitbridge East, sarudzo dzinonzi dzafamba zvakanaka chose.
Sachigaro weZanu PF, VaSimon Khaya-Moyo, vazivisa munguva dzemanheru kuti sarudzo dzave kuzoendera mberi mumatunhu asina kukwanisa kupedza sarudzo idzi neChitatu kusvika munguva dzemasikati.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute, VaPedzisai Ruhanya, vanoti zviri kuitika musarudzo dzeZanu PF izvi chiratidzo chekuti bato iri harina kugadzirira kuitwa kwesarudzo munyika.
VaRuhanya vanoti chimwe chaita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka ndechekuti hapana ari kutungamira sarudzo idzi sezvo vakuru vebato vanofanirwa kunge vachiita izvi vari mushishi yekurwisa kuti vasarudzwewo musarudzo idzi.
Zvichakadaro, sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti riri kushushikana nekushandiswa kwaitwa zvikoro senzvimbo dzekuvhotera nebato reZanu PF.
Munyori mukuru wesangano iri, VaRaymond Majongwe, vanoti danho iri rakanganisa zvidzidzo muzvikoro zvakawanda uye kupinza kutya muvarairidzi.
VaMajongwe vanoti chido nekurudziro yesangano ravo ndezvekuti dai zvikoro zvarega kupinzwa munyaya dzezvematongerwo enyika.